नेपाली अटो बजारमा बढीरहेको महँगीसँग जुध्न टिभीएसले ग्राहकहरुको लागि नयाँ योजना लिएर आएको छ ।
यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले पैसा नै नथपी, आफ्नो पुरानो मोटरसाइकल तथा स्कुटरको मुल्यांकन बाट नै डाउनपेमेन्ट तिरेर नयाँ टिभीएस चढेर जान पाउनेछन् | यसरी एक्सचेञ्ज गर्दा ग्राहकले मासिक (इएमआई) न्युनतम मात्र रु. ५,९९९ सम्म तिर्नुपर्ने हुनेछ ।
यति मात्र नभई ग्राहकहरुले शून्य प्रतिशत ब्याजदर तथा अन द स्पट एक्सचेन्जको सुविधा पनि पाउनेछन् ।
यो योजना मुलुकभरीका सम्पूर्ण टिभीएस सोरुमहरुमा उपलब्ध हुनेछ। टिभीएसले ग्राहकलाई मध्यनजरमा राखेर समय समयमा नयाँ योजनाहरु निकालि रहेको हुन्छ ।
यसका साथै ग्राहकहरुले कुनै बेला पनि टिभीएसको अधिकारिक वेबसाइट https://tvsnepal.com/ मा गएर विभिन्न टिभीएस प्रोडक्ट्स तथा विभिन्न योजनाको को बारेमा जानकारी पाउन सक्छन् ।
यस योजनाको बारेमा बोल्दै जगदम्बा मोटर्सको नव नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् निर्देशक दिपक अग्रवालले भने,’ग्राहकहरुलाई मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरिद गर्न सजिलो बनाउन हामीले यो योजना लिएर आएका हौं। हामी सदैव हाम्रो ग्राहकलाई राम्रो सुविधा दिन तत्पर छौ र आगामी दिनमा यस्ता योजनाहरू लिएर आइरहने छौं ।‘
जगदम्बा मोटर्स प्रा.लि. नेपालमा टिभिएस टू–ह्वीलर्सको लागि एकमात्र आधिकारिक वितरक हो ।